I-LesDON (APP) - I-Pakistan High Commission izobe isebenzisa umyalezo we-video othi "vakashela Pakistan" ku "London New Year's Day Parade (LNYDP) 2020," ekhombisa amathuba ezokuvakasha kuleli.
Ngokwesitatimende sePakistan High Commission eLondon esikhishwe lapha ngoMsombuluko, le vidiyo ekhiqizwe ngokukhethekile, nge-National Anthem tune idlalwe ngemuva, inomyalezo omfishane kaNdunankulu u-Imran Khan, izithombe ezinhle nezithombe zezwe elivakashele izivakashi ezweni lonke Ukuvakasha kweRoyal Couple muva nje ePakistan.
IPakistan ingaba ngelinye lamazwe / izinhlobo eziyishumi nambili (12) ezizokhonjiswa kuma-Giant Screens amboze i-LNYDP usuku lonke.
Izikrini zizotholakala ngokusezingeni lomzila weLondon ePiccadilly Circus, ePall Mall, eTrefalgar Square naseBig Ben / izindlu zePhalamende.
Umlayezo wevidiyo uzodlalwa phambi kwababukeli bemigwaqo ababalelwa ku-650,000 ngaphezu kwababukeli abangaphezu kwesigidi esisodwa usuku lonke.
Ngaphandle kwalokho, amakhulu eziteshi zethelevishini zomhlaba wonke azobe edlulisa umbono we-Giant Screens ezigidini zababukeli babo.
Ephawula ngalolu hlelo, uKhomishani Omkhulu u-Mohammad Nafees Zakaria uthe,
"Ukwethula iPakistan njengendawo ephezulu yabavakashi ka-2020 kuma-Giant Screens eLondon yithuba elihlukile."
Lokhu, uthe bekungumcimbi lapho izivakashi zinquma ukuthi zizovakashela kuphi ngonyaka ongaphambili futhi umyalezo we-'vakashela iPakistan 'ubhalwe ngesikhathi esifanele, ikakhulukazi ngemuva kokuhambela ngempumelelo kweRoyal Travel ePakistan.
“Kuyangijabulisa futhi ukubona ukuthi izincwadi ezihlonishwayo zokuhamba emhlabeni zibekwa ePakistan njengendawo ephezulu yabavakashi. Umyalezo wami kubavakashi emhlabeni wonke ukuthi iPakistan ikulungele ukukwemukela kahle ngonyaka ka-2020 ngezindawo zayo ezinhle zokuvakasha kanye nokungenisa izihambi kwabantu okungenakuqhathaniswa ”, kuphawula uNafees Zakaria.
Muva nje, uConde Nast Traveler, okushicilelwe ngokuvakasha okuvelele e-US, ubeke iPakistan indawo ephezulu yabavakashi.
Phambilini, iBritish Backpacker Society ilinganise iPakistan indawo ephezulu.
Ukwenza lula inqubo yabavakashi abavakashelwa nguhulumeni wamanje nayo kube nomthelela omuhle kakhulu kubavakashi bangaphandle ePakistan, kusho isitatimende.
Izinto ezeluleka ngokumelana nokuziphendulela akuzona izisekelo ezinhle zePakistan: Imran Khan